I-condo enethezekile enamakamelo okulala angu-1 anezindawo ezinhle zokubuka ulwandle - I-Airbnb
I-condo enethezekile enamakamelo okulala angu-1 anezindawo ezinhle zokubuka ulwandle
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Paulina
Ukubukeka kolwandle okubonakalayo, okuhlelwe kahle, ikamelo elilodwa, ikondo lokugeza eligcwele elingu-2.
Ukwakhiwa okusha sha endaweni kanokusho ye-Alamar. Izindawo zokubhukuda ezingenamkhawulo eziseduze, i-clubhouse, neklabhu ekhethekile engasolwandle.
Itholakala e-Cruz De Hunacaxtle emangalisayo - ukuhlangana okuphelele kokuzola, okungokoqobo, nezindawo zokudlela ezimangalisayo, izitolo, imakethe yezinhlanzi yansuku zonke, kanye neMakethe yendawo yangeSonto.
Isanda kwakhiwa, lo mbhoshongo omusha we-Alamar, ikamelo lokulala eliyi-1, i-condo yokugeza egcwele engu-2 inikeza ikhaya likanokusho nelinethezekile lokuzilibazisa kuzo zonke izindawo zase-Puerto Vallarta. Ukubukwa okumangalisayo nomklamo wokungenisa izihambi osezingeni eliphezulu kulindile.
Phumula, hlola, ubhukude (Ukugqamisa ukuthi i-Alamar inezindawo ezingu-3 ezivelele zokubhukuda, zonke zinezindawo zokubhukuda ezifudumele unyaka wonke! I-PLUS ehlukile kakhulu ongayithola kaningi kuyo yonke indawo yase-Vallarta)
Le ndawo iphinde ifakwe i-WiFi yamahhala, isikrini esikhulu se-HD TV, namasevisi okustrima wedijithali.
Uma usukulungele ukugxumela olwandle, ukufinyelela ekilabhu ekhethekile yase-Alamar engasolwandle iphansi egqumeni. Inendawo yokubhukuda enkulu, indawo yokudlela enhle, nokufinyelela okuqondile ebhishi, ungamangazwa uma ulahlekelwa izinsuku ezimbalwa nje zokuphumula ekilabhu.
PHAKATHI nemininingwane eyengeziwe ye-COVID: Uyakwazi uku-oda ukudla kwakho ku-inthanethi noCaldraui (imakethe ehamba phambili) futhi ubalethe ngqo emnyango wakho ngemali encane (Ukulethwa cisheu- $ 80 pesos noma u- $ 4USD) ngokuqinisekile lokhu kuyibhonasi. Kukhona imakethe encane yezithelo nemifino (i-coop) phansi kwegquma, enhle kakhulu ukulanda umkhiqizo wakho omusha nsuku zonke ngokwesidingo. Kukhona nemikhiqizo emisha emakethe e-Marina ngamaSonto.
Empeleni ungahamba ngezinyawo ukuya e-Marina kalula ebhishi.
I-Alamar iyimfihlo impela, futhi ayinabantu abaningi, esitezi seyunithi yethu, kunama-Condos angu-2 kuphela, afakiwe kithi (Uma kuqhathaniswa namanye ama-resort, lapho enamayunithi angu-40 ngendawo ephansi ngayinye... Ngokuqinisekile uzozizwa useceleni.
Kunezindawo eziningana ezenza ukuhlolwa kwe-Covid: isibhedlela esiseduze -CMQ, sizoba nakho konke okudingayo.
Kunezindawo zokudlela eziningi, kuhlanganise neklabhu yasebhishi ye-Alamar, enezihlalo zangaphandle... Akukho okuqabulayo kunokuthi ube nendawo evulekile enomoya wolwandle!
Thina, ngokuqinisekile sibe nekhefu ku-Covid kule-condo enhle.
Kwabiwe ngaphandle i-infinity iyashisa i-lap pool
Itholakala edolobheni lase-Cruz de Hunacaxtle, kulula ukuthandana nalolu hlu lwepharadesi elinobuthongo. Ekuqaleni idolobhana lokudoba, idolobha liye lakhula lafaka i-Marina, izindawo zokudlela ezinhle, izitolo, nemakethe enhle yangeSonto. Kungakhathaliseki ukuthi okokuzithokozisa kwangempela kwase-Mexico, noma ukudla okuhamba phambili, u-Cruz ukunakekele. I-Cruz yindawo ekahle kakhulu yokuthatha izinto kancane.
Kodwa uma ufuna injabulo eyengeziwe, i-Nuevo Vallarta iyibanga lemizuzu engu-25 uma uhamba ngemoto, noma i-Puerto Vallarta ikude ngemizuzu engu-36.
Okuhle kunakho konke, ikhaya elinokuthula, elinokufinyelela ezingxenyeni ezingcono kakhulu zetheku.
Eyethu noma umndeni wethu uyatholakala eduzane nganoma yimiphi imibuzo noma izinkinga. Ukugcinwa kwendlu okwengeziwe namanye amasevisi kuyatholakala uma kucelwa. Siyakujabulela futhi ukunikeza ukusikisela ngezindawo zokudlela nezinto ongazenza. Ukungena kwethu kwe-elekthronikhi kuvumela ukungena kungakhathaliseki ukuthi ihora.
Eyethu noma umndeni wethu uyatholakala eduzane nganoma yimiphi imibuzo noma izinkinga. Ukugcinwa kwendlu okwengeziwe namanye amasevisi kuyatholakala uma kucelwa. Siyakujabulela fut…